Mayelana nathi Apicmo cdmo Abakhiqizi
I-APICMO ngumhlinzeki we-R & D yesivumelwano somkhiqizo weMithi kanye ne-contract.
I-APICMO ineqembu eliqinile le-R & D kanye nososayensi abanolwazi - uDkt Zeng zhaosen. Sineqembu elikhulu lokukhiqiza ukukhiqiza nokuthuthukiswa kwebhizinisi. Amalungu okuphatha ithimba le-APICMO ikakhulukazi avela emazweni athuthukile njenge-United States, Europe neJapane. Ngaphezulu kweminyaka engu-10 yembonini yezinkampanini ezinkampanini zezinkampani zamazwe omhlaba. Ngemva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yokuqoqwa kwemakethe, i-APICMO inesisekelo esibanzi sokubambisana embonini yama-intermediate emithi.
I-APICMO ibambelela kakhulu futhi ivikela impahla yengqondo yamakhasimende ayo. Ngaphezu kwe-APICMO uhlelo oluqinile lokuvikela impahla, i-APICMO isungule irekhodi elihle lokulandelela ukuhlangabezana nokulindelwe kwamakhasimende kazwelonke we-ICH. Ama-APICMO amabanga asekelwe kwamakhasimende kusuka ezinkampanini ezincane ze-biopharmaceutical kuya emaqhingini omhlaba omuthi wezokwelapha, kusukela ezicwaningweni zomhlaba wonke zocwaningo kanye nezikhungo zokuthuthukiswa, kuma-laboratories ezikhungo zokucwaninga, emazweni a-ICH athuthukile aya emazweni asathuthuka afana ne-China ne-India. Ama-APICMO amaphrojekthi kanye nobubanzi bomkhiqizo behlolwe kusukela ku-pre-clinical kuya kwezicelo zezohwebo.
"I-APICMO yi-ISO 9001: I-2008 eqinisekisiwe futhi yonke imisebenzi yebhizinisi layo ihambisana ngokuqinile namazinga omhlaba wokuphatha ikhwalithi."
I-R & D CAPABILITY
ukuhlinzeka ukuthuthukiswa kohlelo, ukwenza ngokwezifiso, ukukhiqiza okuningi kanye nezinye izinsiza zokucwaninga izidakamizwa nezikhungo zokuthuthukiswa kanye nezinkampani zokwelapha.
Amalungu okuphatha ithimba le-APICMO ikakhulukazi avela emazweni athuthukile njenge-United States, Europe neJapane.
I-APICMO iphinde inikezele ukuqinisekiswa kwenqubo, izifundo zekhwalithi, izifundo zokungcoliswa kanye nezifundo zokuzinza ukuhlangabezana nezidingo zekhasimende IND kanye ne-NDA.
I-APICMO ifuna ukuthuthukisa izinqubo nokunciphisa izindleko zamakhasimende ethu. Siye sakha inethiwekhi enhle kakhulu futhi enokwethenjelwa yabakhiqizi baseChina ukuhlinzeka ngemisebenzi esebenzayo yokusebenza nokuthengwa kwempahla ephumelelayo.
Isenzo sesistimu yomzimba womuntu
I-APICMO iyinhlangano yokuwina i-API, Inkampani ye-CMO.
IZIMBUZO ZAMABHAYATHI AMAKHODI
I-LABORATORY EPHAKATHI YONYAKA
Ama-Labs ahlangene ne-5 anamanyuvesi adumile e-5 e-China. I-Sichuan University, i-Ocean University yaseChina, i-Changzhou University, i-Hunan University of Science and Technology, Institute of Chemistry, i-Chinese Academy of Sciences (ICCAS)
Ukunikezwa Kwesikali: kusuka kilogram kuya kwamakhulu ayizigidi zama-kilogram.we unamathimba wokuhlola amaqembu e-10 alawula ucwaningo jikelele lwemakethe ngezigaba ezihlukahlukene zomkhiqizo kanye nokucwaninga kwabathengisi baseShayina, izinkomba zomkhiqizo, njll.
I-APICMO igcwele abantu abanekhono eliqhutshwa ngamakhono
ngubani okhathalela okuningi mayelana nokwenza lokho.
UDkt Zeng Zhaosen
Co-founder, ubuholi bomqondisi benkampani enkulu; I-PhD yamukelwa kusuka eFudan University ku-chemistry ephilayo. Ngaphezu kweminyaka eyisishiyagalolunye nesipiliyoni emkhakheni wezinhlobo eziphilayo we-chemistry zokwelapha. Ukwaziswa okucebile ekhemistini yokuhlanganiswa, ikhemikhali yokwelapha kanye nokuphathwa komkhuba kanye nokuphathwa kwephrojekthi.
UDkt. Liang Yonghong
Co-founder, ubuholi bomqondisi benkampani enkulu; I-PhD yamukelwa kusuka eFudan University ku-chemistry ephilayo. Iminyaka engaphezu kwengu-9 yokuhlangenwe nakho kokusebenza kwamakhemikhali eziphilayo kanye nokwakhiwa kwezidakamizwa; cishe amaphepha okucwaninga we-10 ashicilelwe ezincwadini zokugunyaza, enegunya lobunikazi abangaphezu kwamahlanu.
Eqeqeshwe eMnyangweni wezakhi zemvelo, iStanford University, iStanford University, uMnyango wezakhemikhali kanye namakhemistri, ngaphezu kweminyaka eyi-15 yokuhlangenwe nakho emkhakheni wezolimo zamakhemikhali, uye wakhonza uPfizer Inc, obhekene nokuhlelwa kwemakethe yomhlaba jikelele futhi wenze impumelelo enhle.